Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Adebayo Akinfenwa Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; “Anụ ọhịa ahụ”. Anyị Adebayo Akinfenwa Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Anyị Adebayo Akinfenwa Bio na-enyocha akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya na anụ ahụ dị arọ mana mana ole na ole tụlere akwụkwọ akụkọ Adebayor Akinfenwa nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Saheed Adebayo Akinfenwa mụrụ na 10th nke ụbọchị May 1982 na Islington, United Kingdom. Amuru ya nye nna Alakụba na nne Christian.
Ahụhụ ike nke Akinfenwa ọbụna dị ka nwatakịrị mere ya aha ahụ 'Anụ ọhịa ahụ'. N'oge ahụ ọ bụ nwata, ọ bụ nnukwu onye Liverpool. Egwuregwu kachasị amasị ya bụ John Barnes. O kwuru otu oge… "N'oge ahụ, Achọrọ m uwe elu Steven Gerrard. Agwara m enyi m na ọ bụrụ na onye ọ bụla ebubata uwe elu ya n'ihu m, na anyị ga-enwe nsogbu. ” N'ụzọ na-enweghị obi ụtọ, o nwetara uwe elu ahụ.
Adebayo Akinfenwa hulking frame bụghị mgbe niile a ngọzi, Otú ọ dị, na-egosi na a na-ebu ibu n'oge ọ bụ nwata. Nnukwu site na nwata, nsonaazụ nke ihe nketa ndị Yoruba na ndụ nwata nke ọtụtụ nri starch mere ka Akinfenwa gbalịsie ike ka ndị mmadụ hụ ọhụụ ya.
Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ sonyeere ọgbakọ Frit Atlantas nke Lithuania na ndụmọdụ nke onye nnọchi anya ya, onye nwanne nwunye Lithuania maara otu onye ọrụ nkuzi ebe ahụ. Ọ natara mkparị agbụrụ site na Fans. N'okwu ya…
"Na egwuregwu mbụ m na-eme tupu oge m nụrụ" Zigga, Zigga, Zigga, gbuo ndị ****** n ***** ". Adị m afọ 18 ma cheta na-eche ihe m nwetara onwe m, 'ka ọ na-ekwu. 'Oge ọzọ, otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 11 gbagara m wee sị' Hitler wụsara ntụ ntụ na ihu m '.
Agwara m nwanne m nwoke nke tọrọ m Yemi wee sị 'Ana m abịa n'ụlọ. mana ọ sịrị: 'can nwere ike ịlaghachi ụlọ ma hapụ ha ka ha merie ma ọ bụ nọrọ ma gosi ha ihe ị na-eme. Mgbe m gafere afọ ahụ, echere m na ọ dịghị ihe m na-agaghị emeli na football. ”
Mmekọ agbụrụ mere ka Akinfenwas laghachi na UK ozugbo 2003. Na 'Anụ ọhịa' ghọrọ onye njem mgbe emechara. O sonyeere Barry Town ndị Welsh Premier League na-enyere ha aka inweta Welsh Cup na Welsh Premier League ọlaọcha n'oge ya na Jenner Park.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị egwuregwu ole na ole ka ọ banye na klọb ya, klọb nwere nsogbu akụ na ụba ma hapụ ndị ọrụ ya ka ha na-egwu egwu. Ọ nọrọ klọb 10 n'ime afọ asatọ, gụnyere anọ n'ime otu afọ. Ọrụ njem.
Kemgbe ahụ, Adebayor Akinfenwa ejirila 12 kpoo ihe mgbaru ọsọ 204 na 631 anya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Adebayo Akinfenwa Lifehụnanya Ndụ:
Na paparazzi mgbe niile na prowl na ọtụtụ ụzọ iji jikọọ na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ nwere ike isi ike igbochi ndụ gị na anya ọha. Nke a bụ ihe gbasara Adebayo Akinfenwa bụ onye na-ekweghị ka nwunye ya soro ya gaa nnọkọ ntụrụndụ ma gaa nnọkọ elu-elu.
Enweghị ndekọ nke mmekọrịta gara aga (enyi nwanyị na nwunye) na ịntanetị. N'agbanyeghị nke ahụ, Adebayo Akinfenwa na-eji ụmụ ya eme ka ụwa mara na ọ bụ nna magburu onwe ya. A hụrụ nke a ka ọ na-etinye foto ya n'otu oge ka ọ bụrụ Onye Nna Christmas maka ụmụ ya nwanyị.
Adebayo Akinfenwa makwaara ịbụ nna nke na-etinye oge dị mma n'ịkpụzi nwa ya n'onyinyo na n'ọdịdị ya. Nwa ya nwoke amara aha ya dika ndi nna ya 'obere anụ ọhịa'.
Na-eziga n'akụkụ foto a 'papa na nwa', Akinfenwa dere, sị: 'Enweghị m ike ịmalite ịmalite n'oge m chere. Were my Lil nwoke na office m nke abuo #MiniBeastInTraining.
Adebayo Akinfenwa Ndụ Ezinụlọ:
Akinfenwa amụrụ nna Muslim na nne Christian.
“Mgbe Ramadan bidoro, papa mere ka anyị buru ọnụ, mgbe ahụ, ihe gbanwere dịka m bidoro ịgụ Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị ma gaa ụka. Ọ bụ okwukwe nne m ka a dọtara m. Ana m agụ Bible kwa ụbọchị ma na-aga ụka kwa Sunday. ” Akinfenwa na-ekwu.
Taa, ọ bụ Onye Kraịst na-agụ Bible kwa ụbọchị ma na-aga ụka kwa Sunday, onye na-eti ihe na-ekwu na ya kwenyere na ọ ga-aga nke ọma, n'agbanyeghị ihe sitere na Chineke na ihe atụ nke ndị mụrụ ya. O nwere ụmụnne aha; Hichapụ Akinz na Yemi. N'okpuru ebe a bụ foto nke Dele onye bụ onye egwu.
O kwuru ihe osise dị n'elu; 'I & @delemusic ka gwụchara mgbatị ahụ & ị nwere ike ịhụ onye n'ime anyị bịara work pụta & nke onye, ​​wee na-abia. O nweghi mmiri ajirija na #GymBuddy. '
Ọtụtụ kọmpi rugby na mahadum ndị America zutere ndị òtù ezinụlọ ya ka ha kwenye Akinfenwa ka ọ gbanwee egwuregwu n'ihi oke ya na ike ya. Otú ọ dị, nke a adawo na ntị ntị.
Adebayo Akinfenwa dọrọ aka ná ntị Diego Costa:
Ọ gwara Diego Costa ..“Ọ bụrụ na e nwere otu nwoke ị na-achọghị ịkpasu iwe, ọ bụ‘ Anụ ọhịa ahụ. Aga m agbadokwa ya. Ọ bụrụ na ọ gbadata na ya, m ga-asọpụrụ Diego Costa. Enwere m mmasị na ya dị ka onye ọkpụkpọ mana enwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụrụ na ọ bịakwute m."
Adebayo Akinfenwa bụ onye na-achọ otu oge maka onyeisi oche nke ịgba chaa chaa Steven Gerrard, Adebayo Akinfenwa. Diego Costa maka ọdịnihu ya na onyeisi ndị Liverpool. Na Instagram Post;…
Adebayo Akinfenwa - Nwoke Kasị Ike na Football:
Akinfenwa amarawo nke ọma maka ịbụ onye a họọrọ dị ka onye ịgba egwu kachasị ike n'ụwa na mbipụta dị iche iche nke usoro vidiyo egwuregwu FIFA. Na Septemba 2014, a kpọrọ ya ka ọ gaa nnọkọ mmemme maka FIFA 15 n'akụkụ ndị ọkachamara dị iche iche na ndị egwuregwu Premier League dịka Rio Ferdinand, George Groves na Lethal Bizzle.
Akinfenwa kwuru na ọ dị ihe dịka 16 nkume (101 n'arọ) wee nwee ike pịa 200 n'arọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ahụ ya. Ọ na-agba uwe a na-akpọ Ọnọdụ Beast On nke na-egwuri egwu n'aha ya.
Adebayo Akinfenwa kpaliri 39,000 tweets:
N'ime oge egwuregwu egwuregwu FA n'abalị Mọnde ọ bụla, enwere nnukwu tweets 39,000 metụtara Akinfenwa. #BeastMode bụ nke atọ kachasị ewu ewu dị ka Twitter were iwe maka dike nzuzo nke Wimbledon.
“Beast Mode On bụ ọnọdụ uche,” ka ọ kọwara. "Astkpụrụ Beast bụ itinye onwe gị n'ọrụ na igbochi erughị eru ndị mmadụ na-enye gị."
Mgbe ọ naghị atụ egwu Njikọ Abụọ n'etiti, Akinfenwa na-achọtakwa oge iji gbaa eriri uwe 'Ọnọdụ anụ ọhịa' aha.
Adebayo Akinfenwa FIFA n'usoro Fumming:
ADEBAYO AKINFENWA hapụrụ iwe mgbe a gwachara ya Fifa 18 ọkwa. E nyere ya nsonye nke 98 si na 99 bụ nke kpasuru iwe. Akinfenwa kwuru, sị: “Ya mere ị nwere oge ka mma ma ị gbadaa - chere, n'ezie. Ihe mgbaru ọsọ 18 n'oge gara aga na egwuregwu iri ise - olee ebe nkwanye ugwu?.
Akinfenwa na-eti mmeri site n'aka Christopher Samba bụ onye nke abụọ, Oguchi Onyewu (atọ) na Kendall Watson (nke anọ) dịka onye kachasị ike. Mgbe ahụ, o tinyere vidiyo na Twitter banyere ya ka ọ na-ebuli ihe dị arọ iji gosipụta isi ihe ya ọzọ.
Ọ na-emetụ EA Sports na tweet ma dere, sị: "Yo @EASPORTSFIFA ihe nwanne nwoke ga-eme iji nweta 99strength #BMO # Fifa18 # ComingForFifa19."
Adebayo Akinfenwa ji nkume 16 mee ihe:
Akinfenwa dị 5ft 11 na mana ọ dị arọ na nnukwu 16 ma ọ bụ 102kg. Nke ahụ bụ BMI nke 31.3 ma ọ bụ gburugburu otu ahụ ahụ dị ka onye ịgba egwuregwu ịgba egwuregwu England bụ Tom Youngs. Ya burly na gburugburu ya na-eme ka ọ dị anya site na chiselled, nlereanya-dị ka usoro nke onye dị ka Cristiano Ronaldo.
O kwuru na ọ bụ mgbe niile “Ndammana nnukwu Ihọd”, na ọbụna gbalịsiri ike ka ndị òtù football nwee ike iji ya kpọrọ ihe. "Ndị mmadụ kwuru na m buru oke ibu gbaa bọọlụ," o kwuru. “Otu narị ihe mgbaru ọsọ mgbe e mesịrị, adịghị m. O nweghi oke ihe ị chọrọ ime. ”
Adebayo Akinfenwa bench-pịa Eziokwu - 180kg:
Ọ nwere agụụ maka ibuli ibu arọ ma kweta na ndị ọrụ gara aga agara “Mee ka ọ banye” iji gbochie ya ịnọ ogologo oge na mgbatị ahụ.
Achọpụtala ike Akinfenwa site na usoro Fifa nke egwuregwu vidio, bụ ndị weere ya dị ka onye kachasị ike na ụwa, yana akara ike nke 97 sitere na 100.
Ọ na-ehie ụzọ maka ndị egwuregwu NFL:
A na-ahụkarị Akinfenwa dị ka ndị ịgba egwu. Naanị ọ bụghị mgbe niile dịka ụdị ndị nrịba ama kwesịrị ekwesị. Onye agha ahụ kwetara na onye uwe ojii kpụpụtara ya otu oge na-eche ya maka onye ọkpụkpọ na NFL nke America.
Akinfenwa nwere obi ụtọ ịtọzi ọla kọpa ahụ na-adịghị ọcha, na-agwa ya, sị: "Ana m egwu bọl kwesịrị ekwesị."
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Adebayor Akinfenwa Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bọchị agbanweela: June 22, 2021
Bọchị agbanweela: June 18, 2021